pro – Gaming Noodle
CS:GO မှာ Support ကစားသမားဆိုတာ ဘာလဲ? (By KaeKae)
[Unicode] CS:GO မှာ Support ကစားသမားဆိုတာ ဘာလဲ? By KaeKae (Zaw Yair Naung) အခုလောလောဆယ် CS:GO လောကမှာအငြင်းပွားနေတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲ့တာက တခြား MOBA ဂိမ်းတွေလို Roles တွေ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ထားသင့် မထားသင့်ဆိုတာပါပဲ။ တချို့ကတော့ ဒါကို လက်မခံကြပါဘူး။ Player တိုင်းဟာစိတ်ကြိုက် ပုံစံနဲ့ကစားခွင့်ရှိပြီး ပွဲတစ်ပွဲကို အနိုင်ရဖို့ဆိုတာ အသင်းသားတွေကြားက Chemistry နဲ့ Skills ‌အပေါ်မှာပဲ မှီခိုတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဆိုရင်တော့ ဒီကိစ္စမှာ Roles တွေသာ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရှိမယ်ဆိုရင် ဂိမ်းက ပိုပြီး စနစ်တကျဖြစ်ပြီးပွဲကိုချဉ်းကပ်ရတာ ပိုလွယ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လူတိုင်းဟာ Flashbang ပစ်တတ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ပြိုင်ပွဲမှာ …
CS:GO မှာ Support ကစားသမားဆိုတာ ဘာလဲ? (By KaeKae) Read More »
COVID-19 ကိုရှေ့တန်းကနေ တိုက်ဖျက်သွားမယ့် CSGO Pro ဟောင်း
[Unicode] COVID-19 ကိုရှေ့တန်းကနေ တိုက်ဖျက်သွားမယ့် CSGO Pro ဟောင်း COVID-19 ကပ်ဘေးကြောင့် ဂိမ်မာတွေ အိမ်တွင်းအောင်းပြီး မိမိနှစ်သက်ရာဂိမ်းကို ဆော့ကစားခြင်းဖြင့် အခြားလူတွေနဲ့ Social Distancing လုပ်နေရချိန်မှာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ထဲက ဂိမ်မာတွေကတော့ ဒီရောဂါကို တိုက်ဖျက်ဖို့ ရှေ့တန်းထွက်နေရပါတယ်။ ဒီထဲမှာ လက်ရှိအနားယူထားတဲ့ CSGO Pro ဟောင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံသား ဒေါက်တာ Gokul Sagar လည်းအပါအဝင်ပါ။ အသက် ၃၂ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဒေါက်တာ Gokul Sagar ဟာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကမှ Pro ပလေယာအဖြစ်မှ အနားယူခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ In-game Name က ‘dnm’ ဖြစ်ပြီး အိန္ဒိယရဲ့အကြီးမားဆုံးအသင်းတွေဖြစ်တဲ့ Invictus, Entity …
COVID-19 ကိုရှေ့တန်းကနေ တိုက်ဖျက်သွားမယ့် CSGO Pro ဟောင်း Read More »
League of Legends ကို ပြောင်းလဲကစားတော့မယ့် Dota2 Pro ကစားသမား
[Unicode] League of Legends ကို ပြောင်းလဲကစားတော့မယ့် Dota2 Pro ကစားသမား “Garter” ဟာ Dota ကို Warcraft III မှာထဲက ကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီး ၂၀၀၇ က စလို့ Dota pro အဖြစ် စတင်ရပ်တည်ခဲ့သူပါ။ Solo mid နဲ့ carry role များကို ကစားလေ့ရှိတဲ့ Garter ဟာ အထိုက်အလျောက် လူသိထင်ရှားအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အယ်လ်ဘေးနီးယားနိုင်ငံသား Dota2pro တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Garter အတွက် ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုများနဲ့ ဝေးကွာနေခဲ့ရပေမယ့် သူဟာ လက်ရှိ Dota2လောကရဲ့ ထိပ်သီးကစားသမားများ ဖြစ်ကြတဲ့ Ceb, miCKe, …
League of Legends ကို ပြောင်းလဲကစားတော့မယ့် Dota2 Pro ကစားသမား Read More »
ဂျပန်မှာဘာလို့ Dota2 Pro ကစားသမား မရှိရတာလဲ?
[Unicode] ဘယ်မလဲ ဂျပန် Dota2Pro? ၂၀၁၉-၂၀၂၀ DPC season ကြီးရဲ့ အစမှာ အာရှ Dota2အသင်းများရဲ့ အားကောင်းနေမှုကို အတော်များများလည်း သတိထားမိကြမှာပါ။ တရုတ်နဲ့ အရှေ့တောင်အာရှဒေသများဟာ Dota2နယ်ပယ်ရဲ့ အရေးကြီးအစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်နေခဲ့တာ အစဉ်အလာကြီးတစ်ခုလို ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံလို ဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံကို Dota2ပွဲတွေမှာ မတွေ့ရတဲ့ကိစ္စကတော့ မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ Dota2ဟာ အာရှတစ်ခွင်မှာ အလွန်ခေတ်စားလှပေမယ့် ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ Dota2အပါအဝင် MOBA ဂိမ်းအတော်များများဟာ နေရာကောင်း မရကြသေးဘူးလို့ ယူဆရပါတယ်။ Dota2ပြိုင်ပွဲကြီးများအတွင်းမှာ ဂျပန် …
ဂျပန်မှာဘာလို့ Dota2 Pro ကစားသမား မရှိရတာလဲ? Read More »